Fifaninanana soradihy :: Misokatra ho an’ny Malagasy ny hetsika any Burkina Faso • AoRaha
Fifaninanana soradihy Misokatra ho an’ny Malagasy ny hetsika any Burkina Faso
Miroso ny fikarakarana ny andiany fahavalo amin’ny « In–Out Dance Festival », sehatra fampiroboroboana ny soradihy. Any BoboDioulasso (Burkina Faso) no hanatontosana ny lanonana, amin’ny 30 janoary hatramin’ny 12 febroary 2021. Afaka mandray anjara amin’io hetsika io ny mpandihy eto Madagasikara.
Manana fotoana hatramin’ny 30 septambra 2020 ireo kaompania sy vondrona mpiangaly soradihy handefasana ny talentany, voarakitra anaty rakitsary roapolo minitra no ho mihoatra, amin’ny mailaka administration@tamadia.com.
Sanganasa azo jerena amina toerana mihidy sy ankalamanjana no andrasana, amin’izy ireo. « Tohero ny tahotra » no lohahevitra hiompanan’ny lanonana. Ny volana oktobra 2020 manontolo no hanaovana ny fisafidianana an’ireo soradihy mendrika, araka ny fantatra. Horaisin’ny mpikarakara ny hetsika antanana ny fandaniana rehetra ho an’ireo mpanan-talenta voatsonga handray anjara amin’ny « In–Out Dance Festival », any Burkina Faso.
Taom-pianarana 2020-2021 :: Mikasa hampiditra ny mpianatra amin’ny septambra ny katôlika
Hetsika eny amin’ny CSB :: Hiantoka fiandrasan-draharaha ireo mpitsabo mpanampy